Kubva sitcoms kuti kudanana comedies nyaya neshamwari, isu tese vamwe kwose-akabvuma chokwadi nezvokudanana. zvisinei, maererano nesayenzi dzakawanda izvi “chokwadi” zvakaipa. Saka Unonyatsoziva zvishoma pamusoro dzorudo pane wafunga wakaita, kusvikira ikozvino.
nhoroondo #1: Gamers imhandara vakasurukirwa.
kuburikidza Hollywood, isu tose vanoziva “nerdy chap haana akabata boob” kufanana nevechiduku. More saka, patinonzwa shoko chap, Tinowanzova kufunga nhete chaizvo kana mafuta murume ane dzorudo chinosanganisira Xbox Chats zvichiitika mubereki wavo bhesimendi. Maererano nesayenzi, izvi nerdy gamers vangangowedzera kubuda pamusoro misi pane asiri gamers. Plus, pamwe kukura uchitamba mutambo wacho pamusika kuwedzera kuwedzera multiplayer mitambo, uchitamba mutambo wacho chaizvoizvo kuva chando yakakurumbira mudariki. wo, ngatirege kukanganwa pamusoro mitambo paIndaneti apo vanhu vanosangana uye vakawa murudo.
nhoroondo #2: kufambidzana Online harisi chete chokupedzisira asi chete chinokwezva vakundwa.
Zvinosuruvarisa, nokuda wakaora yokutengesa kuitwa kuwedzera nhema Profiles, kufambidzana paIndaneti yaakawana ane Rap akaipa kwemakore. Kazhinji, mupfungwa dzedu zvakanyorwa akarwawo okupedzisira mugomba achiedza kutsvaka mweya wako; zvisinei, Maonero aya zvakaipa. Pane zvichangobva kudzidzwa vakaratidza kuti mumwe shanu kufambidzana paIndaneti vanoshandisa vanowana paIndaneti kwavo mweya naye. wo, 94% nezvevanhu kusika ukama paIndaneti achabuda musi wechipiri, riri nzira kupfuura chikamu vanhu kundosangana offline NO. Nei izvi? Nekuti kufambidzana paIndaneti ndeyokushandisa kombiyuta, vanhu sevanonyanya vakavimbika uye upfront sezvo vari “kutaura kombiyuta”. Zvifunge, Waizonzwa teura ushingi venyu munhu mangosangana pane mubhawa? Chimwe chikonzero chikuru paIndaneti musi kuti kuzvidzora anondichengeta uye zvichiva yakakurumbira. Mikana uchasangana munhu ane zvido zvenyu ndiye mukuru chaizvo.
nhoroondo #3: In ukama, vakadzi vane manzwiro uye vanhu musoro.
Tose ndamboona asingaverengeki mafirimu uye anoratidza kuti azvidavirire vakadzi anobuda misodzi pamusoro mukomana kana nokupatsanura ukama apo munhu sokuti haazivi uye suave apo nguva dzose richakunda mwoyo womukadzi wacho. Science rinoti varume vari zvakawanda mupfungwa kukanganiswa ukama Drama pane vakadzi, Ivo chete haaratidzi naro. kazhinji Vakadzi vanowanzoona kuti pedyo ukama nemhuri uye neshamwari kubvumira kuti yakawanda kutsigira mupfungwa kunyanya kana totaura guy dambudziko. Guys vanowanzotevedzera chete kuudza vavo kuita kurwa kunyanya zvakaoma pamusoro pavo.
nhoroondo #4: Evakadzi anouraya dzorudo.
Tiine kufanana nevechiduku kuti feminists vari kuzvimirira vakadzi havadi ukama kana munhu kuapedza vari strung kumarudzi mazhinji, zviri chaizvoizvo chakaipa. Vakadzi vanozviti feminists vari kakawanda vari pamwe kwomurume ukama. Varume vari akaroora rainge rakabudirira revakadzi raive akashuma kuti upenyu hwavo zvepabonde hunogutsa kupfuura vaya vasiri. Saka nepo feminists vari yemanyorero kuonekwa sezvo flannel, vakadzi mannish kuti zvechokwadi handizvo zvazviri.
nhoroondo #5: Vakaroorana vanogara pamwe chete vasati varoorana vanyatsogadzirira.
Society rwakamuita kubva chokwadi kuti murume nemudzimai vasina kuwana pamwe nzvimbo achirarama muzvivi. Asi mazuva ano zvinenge zvine musoro. Rinooneka musoro kufamba munzvimbo dzenyu kukosha nevamwe usati kuzvipira pamutemo kuti aigona anopedzisira kurambana. nzira iyi, unogona kuwana kana Mr. Right zvechokwadi Mr. Rudyi. Maererano nesayenzi, vakaroorana vakambogara pamwe asati kuroorana kana kuvimbisana kuroorana vane yepamusoro kurambana uchingodzikira kwevakaroorana kugutsikana. Vakaroorana vanoridza imba asati kuroorana vari kunyanya vakatongerwa kana ivo vanozviita kuti vaedze ukama hwavo. Kana uchinzwa sokuti muchizviedza mudiwa wako ipapo mikana hamusi pamwe chakarurama. Chimwe chinhu chinogona kupinda kutamba ndiyo pfungwa kugadzirisa. vakaroorana, mazuva ano, kubata nokugara pamwe rimwe danho iri kufambidzana kwacho. Kamwe vanotanga kugara pamwe chete, ivo vanoona anenge zvisingaiti aputse sezvo zvemari uye mupfungwa vakagadzikana.
Uye ikoko une naro, ikozvino munoziva zvakawanda pamusoro dzorudo.